Xarun Cilmi Baaris Itoobiya laga leeyahay oo ku talisay in Madaxweyne Xasan Sheekh mar kale la doorto | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Xarun Cilmi Baaris Itoobiya laga leeyahay oo ku talisay in Madaxweyne Xasan...
Xarun Cilmi Baaris Itoobiya laga leeyahay oo ku talisay in Madaxweyne Xasan Sheekh mar kale la doorto
Hay’ad Cilimi-baaris oo fadhigeedu yahay dalka Itoobiya oo la yirahdo CDRC ayaa soo saartay cilmi-baaris ay ka sameeyeen hanaanka doorashooyinka dalka Soomaaliya.
Doorashada madaxtinimada oo markii hore la qorshaynayay inay dhacdo bishii Dec. 2016 kii ayaa dib loo dhigay taasi oo haatan la filayo inay dhacdo dhamaadka bishan Janaayo 2017-ka.
CDRC ayaa sheegtay in hanaanka doorashada Soomaaliya uu la kulmay Musuq-maasuq baahsan iyo faragalin aan loo baahnayn oo uga imaanayay hogaamiyaasha Madasha Hogaanka Qaranka [NLF].
Diblumaasiyiinta Beesha Calaamka ee fadhigoodu yahay Magaalada Muqdisho, ayaa bishii Dec. war ay soo saareen waxaa ay ku sheegeen in hanaanka doorashada Soomaaliya, uu la kulmay fashilaad badan, waxayna sheegeen inay tahay in lala xisaabtamo cid walba oo ku lug leh dhibaataynta doorashada Soomaaliya.
CDRC, waxaa ay sheegtay in dadka u ordayay doorashada labada Aqal intooda badan ay ahaayeen dad ay hagayeen, Qurba-joog, Damul Jadiid [Dhiiga Cusub], wasiiro doonayay in xilalkooda ay dib u helaan, xubno ku aragti Al-shabaab iyo ururo ay ka mid yihiin kuwo diimeed oo ay ku jiraan Salafis, Suufiyo, Wahaabiyo iyo Al-itisaam.
Doorashada Soomaaliya ayaa ah mid ku dhow dhow kuwii ka horeeyay sidii tii 2004-tii 2008, iyo 2012 kii, waxaana muuqata inay xubno badan oo dowladahaasi ka mid ahaa ay doorashadan ka qayb galeen.
Isbadelka la dareemayo waxaa aqalka Sare ee Soomaaliya, kaasi oo matali doona Maamul gobaleedyada islamarkaana go’aan –qaadasha dalka door wayn uu ka ciyaari doono.
329 mudane oo ka tirsan labada Aqal ayaa lagu wadaa inay doortaan madaxwaynaha soo aadan ee Soomaaliya.
“Qaraarada iyo Sharci dajinta ay sameeyeen Baarlamaanka sida inay mooshin ka keenaan hogaanka awoodaha fulinta iyo mooshinada kalsooni kala kaabashada waa kuwo lacago badan” CDRC.
Hay’ada waxaa ay sheegtay in abuurista maamul gobaleedyo dhamaystiran ay halisteeda leedahay.dastuurka soomaaliya midka KMG ah oo la sameeyay 1 August 2012 kii waxaa uu qabaa in 2 gobal iyo wixii ka badan ay isu imaan karaan ayna samaysan karaan maamul gobaleed.
Dhimaatada maamul goaleedyadu ay la yimaadeen waxaa ka mid ah is-qabqabsiga dhanka xuduudaha sida kuwa ka dhaxeeya Soomaliland, Puntland iyo Galmudug.
Gobalka Banaadir oo ay ku taalo xarunta Soomaaliya oo isaguna xuduudo badan la leh gobalo badan.
Arimaha awood qaybsiga Beelaha.
Awood qaybsiga beelaha ay wax ku qaybsadaan waxaa la dajiyay 2004 tii xiligaasi oo wax lagu qaybsaday nidaamka 4.5 .
Inkastoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida iyo qaar ka mid ah beesha caalamka ay wax ka sheegeen nidaamkan, hadana waa mid ilaa iyo hadda wax lagu qaybsado.
Hay’adan oo laga leeyahay dalka Ethiopia ayaa waxaa ay qiimayn ku samaysay sida uu noqon doono madaxwaynaha soo aadan ee Soomaaliya.
Waxaad moodaa in si hadii loo eego ay taageerayaan in Madaxwaynaha hadda uu soo laabto mar kale.
Beesha hawiye siyaasiyiintooda ayaa waxaa ay soo sharxeen Gudoomiyaha Baarlamaanka kaasi oo kazoo jeedaa Digil iyo Mirifle, si mar kale madaxwayne u noqdo qof Hawiye ah.
Waxaa ay sheegtay in inkastoo Faarax Sheekh Cabduqaadir oo ay ku sheegeen inuu yahay siyaasi aad u xoogan uu waayay damciiisa ku aadanaa inuu noqdo gudoomiye ku xigeen, ayaa haddana isaga iyo Xasan Sheekh waxaa ay wadaan in markale Madaxwayne Xasan Sheekh uu soo laabto.
Hadii uu yimaado madaxwayne aan ahayn Xasan Sheekh, waxaa ay noqon doontaa in shaqada laga soo bilaabo meeshii ay joogtay sanadkii 2012 kii.
Soo laabashada Hasan Sheekh, waa macquul gal aad u wayn marka loo eego sida ay wax u socdaan, sida ay ku cadaynayso hay’adan Itoobiyaan ka ah qoraal bille ah oo ay soo saareen.
Waxaa ay sheegeen in Xaqiiqada taala Soomaaliya inay tahay in siyaasiyiinta Hawiye ay qaarkood aaminsan yihiin in hadii uu xilka Madaxwayne uu ku guulaysto qof daarood ah in maalin un Magaalada Muqdisho ay u gacan gali doono Alshabaab.
“Marka loo eego Taariihda iyo dhabta tagaan in loo ogolaado Hawiye inay sii haystaan madaxwaynaha waa talaabo Aqli gal ah” waxaa sidaa qortay Hay’adda aan dowliga ahayn ee dalka Ethiopia ka dhisan ee CDRC.
Waxaa ololaha doorashada Soomaaliya qayb wayn ka ciyaaraya shirkado ganacsi oo doonaya inay shidaal ka baaraan biyaha ay ku maransan yihiin Soomaaliya iyo Kenya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, isku daygiisa xilka Madaxwaynaha waa mid isaga kali uu yahay oo uu ku tijaabinayo nasiibkiisa.
Madaxwaynaha Maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan , oo horay xildhibaanada deegaanadaasi uga codsaday inaysan isu soo taagin xilka gudoomiyaha baarlamaanka ayuu ku fashilmay Shariif. Laakiin shariif Xasan waxaa wali uu yahay ‘Boqor Sameeye
Previous articleAkhriso wararkii ugu dambeeyay ee Gambia
Next articleIn ka badan 30 qof oo ku geeriyooday ka dib Daar ku duntay Magaalada Tehran